Valiny eropeana momba ny Coronavirus: Vodka, Sauna, ary fanokanan-toerana an-tery amin'ny marary
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Valiny eropeana momba ny Coronavirus: Vodka, Sauna, ary fanokanan-toerana an-tery amin'ny marary
Inona no olana Coronavirus? Voafehintsika io!
Belarus, amin'ny fomba ofisialy ny Repoblikan'i Belarus, izay fantatra amin'ny anarana rosiana Byelorussia na Belorussia, dia firenena tsy misy mpiambina any Eropa Atsinanana izay sisin-tanin'i Russia any avaratra atsinanana, Ukraine any atsimo, Poland any andrefana, ary Lithuania sy Latvia any avaratra andrefana. Ny renivohiny ary ny tanàna be mponina indrindra dia Minsk. Minsk dia tanànan'ny antoko eropeana ankehitriny.
Mitohy ny fiainana tsy misy fanidiana sy famerana. Ny rafitry ny fahasalamana karazana sovietika dia mbola miasa ary mandaitra. Vantany vao fantatra ny COVID-19 dia hampidirina hopitaly ilay olona. Hivoaka ao anatin'ny minitra vitsy ny polisy ary hanafatra ny olona rehetra voamarina fa nifandray tamina hopitaly nandritra ny 2 herinandro.
Ny fanokanan-tena amin'ny marary ihany koa no torin'ny mpitondra rehetra eto amin'izao tontolo izao ankehitriny, fa tara ho an'ny firenena maro. Toa mandeha ny fomba fiasan'i Belarus ary ara-potoana. Mijanona hamokatra hatrany ny firenena ary tranga 94 fotsiny no voarakitra ao amin'ity firenena ity izay 9.5 tapitrisa. Tsy nisy maty hatreto.
Mandritra izany fotoana izany, fotoana fialantsasatra malaza dia ny City Pub Crawl Minsk. Ity dia fitsangatsanganana iray izay nanova ny piainan'ny Pub mahazatra ho lasa lalao tadiavina, izay ahazoan'ny mpandray anjara isa ho an'ny asa fisotroana vita. Ary amin'ny lalao famaranana, ny mpandresy mahazo ny goaika dia ny mpanjaka.
Trano fisakafoanana, tsena ary fivarotana fivarotana feno olona no feno ao Belarus. Misokatra ny fiangonana, ary ny toro-hevitra tokana avy amin'ny filoha Alexander Lukashenko dia ny misotro vodka be dia be ary hatsembohana izay rehetra any amin'ny saona.
Toy ny firenena manodidina nanidy sisintany, nanidy ny fitaterana mpandeha, nandrara hetsika lehibe ary nifindra tao an-trano.
Milalao ny ligin'ny baolina kitra any Belarus, ilay tokana tokana any Eropa mbola eny an-kianja. Mampiroborobo premieres ny teatra. Ny tafika an'habakabaka dia manao fanazaran-tena eny an-tsaha. Fampirantiana sy fampirantiana Kristiana Orthodoksa, Easter Joy, hotontosaina amin'ny 1-12 aprily ao an-drenivohitra Minsk, misy hetsika ho an'ny fianakaviana sy ny ankizy.
Vehivavy mitafy akanjo belarosiana nentim-paharazana mitazona mofomamy amin'ny lalao baolina kitra Alahady ao Barysaw, Belarus.
Tamin'ny 19 martsa, niantso ny fanidiana ny sisintany nataon'ireo mpifanila vodirindrina dimy ao Belarus ho toy ny tsy misy ilàna azy sy “hadalana tanteraka.”
Mety ho toa mahazatra izany eo ambanin'ny mpitondra manam-pahefana. Tao amin'ny filoham-pirenena amerikana Trump, izay nilaza tamin'ny voalohany fa "voafehy be" ny valanaretina any Etazonia. Nantsoin'ny filohan'i Brezila Jair Bolsonaro ho nofinofy amin'ny haino aman-jery sy “gripa kely” io, ary nilaza fa afaka mitsambikina any anaty tatatra ny Breziliana ary tsy harary.
Ny herinandro lasa teo dia nitanisa ny fampitandreman'i Trump izy fa ny fitsaboana dia tsy tokony ho ratsy noho ny aretina ho fanamarinana ny fomba fitahirizany ny orinasa sy ny orinasa misokatra ary mandà ny hanidy ny sisin-tany.
“Miasa amin'ny traktera ny olona. Tsy misy miresaka momba ilay viriosy, ”hoy i Lukashenko. “Any, ny traktera dia hanasitrana ny olon-drehetra.
Nasainy koa ny olona manasa tanana matetika kokoa, misakafo maraina ara-potoana, misakafo atoandro sy misakafo hariva.
Ny alakamisy teo ihany dia nametraka fepetra i Belarus fa ny vahiny tonga dia lasa mitokantokana 14 andro. Belarus dia nanao fanandramana coronavirus kendrena - 24,000 hatreto (ampitahaina amin'ny 250,000 ho an'ny vahoaka 145 tapitrisa ao Russia) sy ny fanarahan-dia. Lukashenko dia nanafatra koa ny famokarana ventilator.
Saingy nanamafy izy fa tsy mandeha ny fanidiana sy ny fanidiana.
Lukashenko dia niahiahy bebe kokoa momba ny krizy ara-toekarena ho avy vokatry ny virus coronavirus fa tsy ilay virus mihitsy. Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia nanohana ny fomban'ny manampahefana Belarus amin'ny fitsapana, ny fanarahan-dia ary ny fitokanana ireo tranga Covid-19 sy ireo olona nifandray tamin'izy ireo.
Ho ela velona ny Mpanjakan'i Thailandy any Bavaria miaraka amin'ny Harem of 20 Beautiful Thai Ladies